बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ त नेपालमा इन्टरनेट ?
टिप्पणी शनिबार, असोज ११, २०७६
त्यसैका आधारमा श्री ३ मोहनशमशेरले २४ पुस २००७ मा शासन सुधारका लागि पाँचबुँदे घोषणा गरे । त्यो घोषणामा नयाँ वैधानिक कानून बनाउन वैधानिक सभाको चुनाव गराउनेदेखि पञ्चायतको अवधारणा उल्लेख थियो ।
राजा महेन्द्र (बायाँ) र प्रधानमन्त्री माेहनशमशेर जबरा ।
मोहनशमशेरले करीब २०० वटा ग्राम र जिल्ला पञ्चायत खडा भइसकेको र बाँकी ५०० वटा सकभर २००९ सालभित्रै खडा गराउने प्रयास हुने उल्लेख गरेका थिए ।
ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०१६) का अनुसार, घोषणाको बुँदा १ मा वैधानिक सभाको चुनावका निम्ति सकभर चाँडै मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख थियो ।
वैधानिक सभाको पहिलो बैठक २००९ सालभित्रै गराउन प्रयत्न गर्ने पनि भनिएको थियो । यस्तै, वैधानिक सभा गठन गर्न केन्द्रमा तुरुन्त १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र त्यसमा ७ जनाले लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख थियो ।
देशको शासनभार मन्त्रिमण्डलमा सुम्पिने विषय पनि घोषणामा प्रष्ट लेखिएको थियो । मन्त्रिमण्डलको क्षेत्राधिकारबारे लेखिएको थियो, “देशको आयव्ययमा मन्त्रिमण्डलको अख्तियारी हुनेछ र बजेटको प्रथा पनि तुरुन्तै चालु हुनेछ ।”
वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान लागू नभएसम्म ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ चालु रहने व्यवस्था घोषणामा उल्लेख थियो ।
तर यस घोषणाद्वारा भएका वा मन्त्रिमण्डलले गर्ने अदलीबदली सो कानूनका दफाहरूसँग बाझिए नयाँ हेरफेर नै कायम हुने भनिएको थियो ।
मोहनशमशेरले २००४ सालको वैधानिक कानून बमोजिम लागू हुनुपर्ने बाँकी विषयहरू सकभर चाँडै लागू गराइने वाचा पनि गरेका थिए ।
ती बाँकी विषयहरूमा (१) न्याय सम्बन्धी दफाहरू अर्थात् न्याय विभागलाई कार्यकारिणीबाट पृथक् गर्ने (२) एड्भोकेट जनरल र अडिटर जनरलको नियुक्ति र (३) सरकारी जागिरको निम्ति योग्य उम्मेदवार छान्न पब्लिक सर्भिस कमिशनको नियुक्ति र देशको सुशासन गराउने अन्य विषयहरू भनेर घोषणामा समेटिएको थियो ।
श्री ५ त्रिभुवनलाई भूतपूर्व महाराजाधिराज र ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ लेख्ने गरेकोमा २४ पुसदेखि ज्ञानेन्द्रलाई ‘रिजेण्ट’ कायम गरियो । २८ पुसबाट ज्ञानेन्द्रका नामबाट मुद्रा निष्कासन बन्द गरी त्रिभुवनकै नाममा टकमारी शुरू भयो । १ माघमा मौलिक हक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भयो । फकाउन हो या किन हो, दिल्लीमा राजा त्रिभुवनलाई मोहनशमशेरले भारु तीन लाख पठाए।
हत्या, लूट र आगो लगाउनेहरू बाहेकका राजनीतिक कैदीहरूलाई माफी दिइने योजना मोहनशमशेरको घोषणामा समेटिएको थियो । हिंसाको नीति अनुसरण नगरेका देशभित्रका संस्थाहरू मात्र होइन, देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले खडा गरेका संस्थाले देशको उन्नति र सुशासनको काममा सहयोग गर्न चाहे तिनलाई पनि स्वागत गरिने भनिएको थियो ।
घोषणाको पाँचौं तथा अन्तिम बुँदामा श्री ५ त्रिभुवन स्वदेश नफिरेसम्मका लागि एक रिजेण्ट (नायव वा राज्यसहायक) नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
मोहनशमशेरको घोषणा र त्रिभुवनको सन्देशपछि देशभित्रको माहोल केही फरक हुन थाल्यो । ४ माघबाट राजनीतिक कैदीहरू (राजबन्दी भन्ने शब्द बनेकै थिएन) धमाधम रिहा भए ।
श्री ५ त्रिभुवनलाई भूतपूर्व महाराजाधिराज र ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ लेख्ने गरेकोमा २४ पुसदेखि ज्ञानेन्द्रलाई ‘रिजेण्ट’ कायम गरियो । २८ पुसबाट ज्ञानेन्द्रका नामबाट मुद्रा निष्कासन बन्द गरी त्रिभुवनकै नाममा टकमारी शुरू भयो । १ माघमा मौलिक हक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भयो । फकाउन हो या किन हो, दिल्लीमा राजा त्रिभुवनलाई मोहनशमशेरले भारु तीन लाख पठाए ।
नेपालको राजनीतिबारे भारतको मध्यस्थतामा ‘दिल्ली सम्झाैता’ भई ४ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए । उनले ७ फागुनमा शाही सम्बोधन मार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । तर, वैधानिक सभाको निर्वाचन गर्ने र सभाको बैठक बस्ने मिति तोकिएन । राजाको घोषणामा मोहनशमशेरले गरे जति पनि परिवर्तनका मुद्दा छैनन् ।
मंगलबार, असार २३, २०७७ बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ त नेपालमा इन्टरनेट ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ गंगालाल अस्पतालका बिरामीमा कोरोना देखिएपछि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द